Gịnị Ka M Ga-eme Ka Mmadụ Ghara Igwusa M Egwuregwu Iberiibe? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Korean Sign Language Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị Ka M Ga-eme Ka Mmadụ Ghara Igwusa M Egwuregwu Iberiibe?
Lee ihe ụfọdụ Baịbụl kwuru nwere ike inyere gị aka:
Abụla onye oké egwuregwu. Abụla ihu atọ ọchị, na-akwanyekwara ndị gị na ha na-arụ ọrụ ùgwù. Ma, zere ime ihe ga-eme ka ọ dị ha ka ị̀ chọrọ ka ha na-egwusa gị egwuregwu iberiibe.​—Matiu 10:16; Ndị Kọlọsi 4:6.
Na-eji ejiji dị mma. Iyi efe na-enyo enyo, efe na-atapara n’ahụ́, na efe dị mkpụmkpụ ga-eme ka ndị mmadụ chewe na ihe iberiibe na-adị gị mma. Baịbụl sịrị ka anyị ‘jiri uwe dị mma n’anya na-achọ onwe anyị mma n’imeru ihe n’ókè na uche zuru okè.’​—1 Timoti 2:9.
Saa anya ná mmiri họrọ ndị gị na ha ga na-akpa. Ọ bụrụ na ndị gị na ha na-anọrị bụ ndị na-achụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ma ọ bụkwanụ ndị chọrọ ka a na-achụ ha, ọ ga-eme ka a na-egwusa gị egwuregwu iberiibe.​—Ilu 13:20.
Anọla ebe e ji ihe iberiibe ama njakịrị. Ọ bụrụ na ndị gị na ha na-akparịta ụka ekwuwe “okwu nzuzu ma ọ bụ okwu njakịrị rụrụ arụ, bụ́ ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị,” si ebe ahụ pụọ.​—Ndị Efesọs 5:4.
Anọla ebe ga-etinye gị ná nsogbu. Dị ka ihe atụ, mmadụ gwa gị nọtukwuo n’ụlọ ọrụ ma a gbasaa ọrụ n’enweghị ezigbo ihe kpatara ya, chee echiche nke ọma mara ihe ị ga-eme.​—Ilu 22:3.
Ọnụ sie gị ike. Ọ bụrụ na mmadụ egwusa gị egwuregwu iberiibe, gwa onye ahụ hoo haa na ị chọghị ụdị egwuregwu ahụ. (1 Ndị Kọrịnt 14:9) Dị ka ihe atụ, i nwere ike ịgwa ya, sị: “Otú i si emesa m aka adịghị mụ mma. Ọ bụrụ egwuregwu, kwụsị ya. Achọghị m ya.” I nwere ike degara ya akwụkwọ ozi kọwaara ya ihe o mere, otú ihe ahụ o mere dị gị nakwa na ị chọghị ka ụdị ihe ahụ mee ọzọ. Mee ka o doo ya anya na ị kpọrọ ụdị ihe ahụ asị nakwa na Akwụkwọ Nsọ kagburu ya.​—1 Ndị Tesalonaịka 4:​3-5.
Gwa ndị ọzọ ka ha nyere gị aka. Ọ bụrụ na onye ahụ anọgide na-egwusa gị egwuregwu iberiibe, kọọrọ ya ezigbo enyi gị, onye ezinụlọ gị, ma ọ bụ onye ọrụ ibe gị, ma ọ bụkwanụ onye ọzọ ị maara ga-enyeliri gị aka. (Ilu 27:9) Ikpe ekpere na-enyere ọtụtụ ndị a na-egwusa egwuregwu iberiibe aka ka ha ghara ịda mbà. Ọ bụrụgodị na i kpetụbeghị ekpere, echela na o nweghị ezigbo aka Jehova, bụ́ “Chineke nke nkasi obi niile,” ga-enyere gị.​—2 Ndị Kọrịnt 1:3.
Egwuregwu iberiibe a na-egwusa ọtụtụ nde mmadụ emeela ka ahụ́ ghara iru ha ala n’ebe ha na-arụ ọrụ. Ma Baịbụl nwere ike inyere ndị ọ dị otú ahụ aka.
Chọpụta ihe bụ́ egwuregwu iberiibe na ihe ị ga-eme ma e gwusawa gị ya.